Oge - Goodao Technology Co., Ltd.
Batrị chaja & Jump Starter
Inverter & Ihe Ntụgharị
Lightlọ ahịa Light
Ogwe Tail & Trailer
Mkpa ọkụ / Mgbama ọkụ
Njikọ ụgbọ ala
Guzobere na 1995, HANGZHOU TONNY ELECTRIC & TOOLS CO., LTD.bụ otu n’ime ndị nrụpụta ihe na ndị na-eweta ngwa elele eletrik na ngwa ọrụ China. Factorylọ ọrụ anyị dị na Xianlin Industrial Mpaghara, Yuhang District, Hangzhou 311122, Zhejiang nwere ala dị puku kubit 20,000 na mbara ala 15,000.
Companylọ ọrụ anyị ama ama n'ihe eji arụ ọrụ, nrụpụta na nkesa nke ngwa eletriki elekere eletrik na ngwaọrụ, dị ka chaja batrị, inverters, Starter, ọkụ ọrụ, ọkụ beacon, Fans ụgbọ ala, DC DC, igwe ikuku, igwe nhicha igwe, wdg. mee oru OEM na ODM. Ikike imepụta oke dị ukwuu nke usoro ọkọlọtọ 14, ọtụtụ igwe injection dị elu, na ndị ọrụ karịrị 450 bụ ike nrụpụta nke anyị. Site kwa na njikwa njikwa siri ike, anyị nwere ụlọ nyocha nnwale ọkachamara zuru oke nke ngwa nyocha na nyocha dị elu. Otu ọkachamara QC&QA nwere ike ikwe nkwa mepụta usoro ISO9001: 2015. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu R&D ihe karịrị injinia nwere ọhụụ 20 na-azụlite ngwaahịa okike ọhụrụ ma na-enye nkwado ọrụ aka n'ozụ mgbe arịrịsịrị.
Mpaghara ebe a na-emepụta ihe
Onu ogugu ndi oru
Onu ogugu injinia: 20 mmadu
Akụrụngwa chepụta: Solidworks, Pro / E, Rino, wdg.
Inye ndi OEM & ODM ka ndi ahia n’ile dika ihe nlere ha, esere ma obu echiche ha; Nye ndị ahịa nkwa dị mkpa iji nwee ike idowe ogo ahụ ma mezuo ihe ndị ahịa chọrọ.
Ndị otu kọmputa
Otu Ihe Nhazi
Walọ nkwakọba ngwá ọrụ
Osisi ogwu ogwu
Ike injection plastik: 100g ruo 2500g;
Otutu igwe: 20+
Nnukwu imepụta usoro kwụ ọtọ 14 na ihe karịrị ndị ọrụ 450 bụ ikike nrụpụta ikike anyị, otu ndị ọrụ QC&QA nwere ike ikwe nkwa mepụta usoro njikwa mma ISO9001: 2015.
Ike relọ nkwakọba ihe
Anyị nwere ebe nkwakọba obosara nke puku kubit 50,000, rute arịrịọ onye ahịa ahụ maka ịchekwa ya
Sistemụ: Etinyela usoro ERP n'oge usoro ọmụmụ ahụ dum.
Anyị nwere otu ụdị arụmọrụ nwere ahụmịhe. Ọtụtụ n’ime ha nwere ihe karịrị afọ iri na ise nke ahụmahụ n’ime
Anyị nwere ike iburu akpa 3x40HQ n'otu oge.
Anyị na - akọpụta ngwaahịa ndị ọhụrụ, ma na - ejere ndị ahịa anyị ozi na ahịa niile nke ụwa. Ndị ahịa anyị a na-akwanyere ùgwù dị ukwuu na-enwekwu ọ popularityụ na ụwa, dị ka Wal-Mart, Autozone, Scotts Company, Advance Auto Parts na Lidl wdg.
Companylọ ọrụ na-ekwenye ekwenye
& Bido ụbọchị
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndị na-ere ahịa, biko kpọtụrụ anyị ma anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa iri abụọ na anọ.
Adreesị:Okporo ụzọ No.1 Jiaqi, Mpaghara Xianlin, Mpaghara Yuhang, Hangzhou, China